Barnaamijkeenii Xiisaha BAdnaa Ee KOBCI MASKAXDAADA Iyo Qodobo Muhiim Ah.. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: February 10, 2017, 12:52 am
Dadka oo laga ilaaliyo dareenkooda waxa dhibaya kama Liidato oo kama hoosayso, Adigoo ka leexiya ama ka qaada wadada ay marayaan Waxa ama shay dhibaataynaya!..
Qofka walaalkaa ah dhibaatada haysta hadii aanad la qaybsan karin waxaad ugu deeqdaa malo wanaagsan!
Kuwii dhibaatada ka cabanayay Markii ay istageen ee ay yidhaheen waanu gaajoonayna? Kii sawir qaadaha ahaa wuxu bilaabay inuu markiiba sawir ka qaado. Kii Abwaanka ahaana wuxu ka Alifay (curiyay) Gabay, Qoraagiina wuxu ka fekerayay waxa sabab u ah gaajada haysa.
Laakiin islaan da’ ah ayaa iyadu markiiba siisay qofkii gaajadu haysay jab roodhi ah, taasi oo bixisay jawaabtii saxda ahayd oo dabooshay baahidii haysay qofkan, Marar badan waxa aynu ku mashquula arrintii jirtay mid aan ahayn.
Cali Binu Abud-dalin ayaa yidhi “ Haddii aad aragto culimada oo albaabada boqorada taagan , waa culimo xun, haddii aad aragto boqorada oo albaabada culimada taagana waa Boqoro wanaagsan iyo culimo wanaagsan.
Qisaska Faaliyeyaasha CIA iyo Madaxda Dunida! Maxaad Ka Ogtahay Arrimahan..!!